Suuqa Hawlgabka - Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Adeegyada Ganacsiga Yaryar|Suuqa Hawlgabka
Suuqa Hawlgabku wuxuu ku nool yahay hawlgabka'marketmarketplace.com '
Suuqa Hawlgabka ee Washington, oo ay maamusho Wasaaradda Ganacsiga, waa goob suuqeed oo internetka ah oo shirkadaha adeegyada maaliyadeed ee aqoonta leh ay siiyaan qorshooyinka keydka hawlgabka ee jaban ganacsiyada iyo shaqsiyaadka, oo ay ku jiraan mulkiileyaasha keligood ah, shaqaalaha "gig" iyo kuwa iskood u shaqeysta. Suuqa Hawlgabku wuxuu fududeynayaa habka lagu helo qorshaha keydinta howlgab iyadoo sahleysa in la isbarbar dhigo qorshooyinka gobolka uu ansaxiyay.
Suuqa ayaa ah xarun wargelin ah, oo isu keenta shirkadaha adeegyada maaliyadeed, loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha si ay uga caawiyaan hawlgabnimada qof walba suurtagal. Suuqa wuxuu ku dadaalayaa inuu fududeeyo xulashooyinka keydka hawlgabka isagoo siinaya macluumaad waxtar leh isla markaana dhiirrigeliya alaabada la awoodi karo. Mabaadi'da hagitaanku waxay u oggolaaneysaa shakhsiyaadka inay gaaraan go'aanno xog-ogaal ah oo ku saabsan hawlgabnimadooda ayna bilaabaan inay dhisaan kaydinta mustaqbalkooda.
Waxa Aan Ognahay
Waxaa jira farqiga keydka hawlgabka. Dadka reer Washington kuma keydsan karno howlgabnimada, qatarta ah in sanadahooda dambe ay ku qaataan heerarka nolosha oo sii yaraanaya iyo ku tiirsanaanta barnaamijyada shabakadda badbaadada bulshada
1.3 - 1.6 milyan oo reer Washington ah oo shaqeynaya ayaan marin u helin qorshooyinka keydka howlgabka shaqada.
In ka badan 131,000 ganacsiyada Washington ayaa u fidiya MAYA heshiisyada keydka hawlgabka shaqaalahooda.
Ganacsiyada yaryar ayaa laga yaabaa inay diidaan inay bixiyaan qorshooyin hawlgab sababtoo ah aragtida qiimaha iyo kakanaanta.
Warbixinta Ganacsiga ee Noofambar 2017 ee Diyaarsanaanta Hawlgabka si faahfaahsan u baaraya xaaladda.
Awood u Leh inaad Ku Badbaadiso Arimaha Shaqada
Waan ognahay inay dadku u badan tahay inay lacag u qoondeeyaan hawlgab markay ku samayn karaan iyada oo loo marayo jarista mushaharka. Nasiib darrose, way ku adag tahay ganacsiyada yaryar inay kala saaraan ikhtiyaarrada ayna awoodaan inay siiyaan qorshooyin hawlgab shaqaalahooda. Hadafkeenu waa in la kordhiyo keydka howlgabnimada reer Washington anagoo u fududeyneyna kana qiimo jaban loo shaqeeyayaasha yar yar inay siiyaan fursadaha keydka howlgabka shaqaalahooda.
Suuqa ayaa kaa caawin kara
Isticmaalayaasha - ganacsiyada iyo shakhsiyaadka labadaba - waxay isbarbar dhigi karaan dukaanka qorshooyinka keydka hawlgabka ee bogga. Macluumaadka goobta ayaa u oggolaan doona isticmaalayaasha inay ku xirmaan maamulayaasha qorshaha si ay isu diiwaan geliyaan ugana qayb qaataan qorshooyinka. Kaqaybqaadashada Suuqa Hawlgabka ee shirkadaha adeegyada maaliyadeed, loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhuba waa ikhtiyaari. Qaadhaan-qorista waa la qaadi karaa, markaa marka shaqaaluhu shaqada beddelaan, waxay la tagi karaan keydkooda hawlgabnimada.
Xeerarka la xiriira Suuqa Hawlgabka
ESSB 5826, Cutubka 296, Xeerarka 2015
SSB 5675, Cutubka 69, Xeerarka 2017
Adeeg Bixiyeyaasha Adeegyada Maaliyadeed: Waxqabad Hadda!
Helitaanka qorshooyinkaaga keydka hawlgabka ee ku taxan Suuqa waa geedi socod laba-tallaabo ah:
Hubi inay xaqiijiso hay'ad sharciyeyn ku saleysan Gobolka Washington.
Waaxda Hay'adaha Maaliyadeed (DFI) wuxuu kormeeraa sidayaasha bixiya alaabada ku saleysan dammaanadaha. Tilmaamaha sida loo dalbado xaqiijinta ayaa ku taxan halkan.
Xafiiska Wakiilka Caymiska (OIC) wuxuu kormeeraa sidayaasha bixiya alaabada caymiska ku saleysan. Tilmaamaha buuxinta waxaa laga heli karaa Qaybta III (M) ee tilmaamaha fayl garaynta ee SERFF (bogga 7), oo laga heli karo halkan.
OIC: OIC waxay codsan kartaa in DFI ay sameyso dib u eegista qorshaha, sida ku xusan SSB 5675 Sec. 1 (6) (b) (2017). Caymiska nolosha iyo alaabada sanadlaha ah ee ay bixiyaan shirkadaha caymiska waa inay wali bilaabaan nidaamka xaqiijinta OIC.
2. Dhameystir Codsiga Suuqa Shaqada ee Hawlgabnimada Waaxda Gobolka Washington.
Waaxda Ganacsiga waxay maamushaa barnaamijka Suuqa Hawlgabka iyo degel. Shuruudaha Guud iyo Shuruudaha iyo macluumaadka kale waxay noqon karaan halkan ka hel.
Ka codso nuqul ka mid ah arjiga emailka howlgabnimadamarketplace@commerce.wa.gov ama wac 360-725-5070. Dhameystirka arjiga wuxuu la socon karaa nidaamka xaqiijinta ee kor lagu sharaxay ama marka ay xaqiijiso DFI iyo / ama OIC. Macluumaadka ku saabsan arjiga la dhammaystiray waxaa loo isticmaalaa sidii shaxanka daabacaadda si loogu soo gudbiyo xogta qorshaha websaydhka Hawlgabka Suuqa.
Hawlgabka Diyaarsanaanta Macluumaadka
Download oo la wadaag macluumaadkan si aad uga caawiso barashada dadka kale sida ay reer Washington ugu diyaar garoobeen hawlgab.